Welcome to SUNSOUL LIVE SHOW at Aug 15th-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO.,LTD
Tongasoa eto amin'ny SUNSOUL LIVE SHOW amin'ny 15 Aogositra
Inona marina no atao mivantana?
Ny fampielezana mivantana dia fifaneraserana amin'ny fotoana tena izy, fomba iray ifaneraserana ary fomba fialamboly. Ny streaming mivantana koa dia fomba famokarana atiny vaovao. Ny sehatra fandefasana mivantana dia sehatra iray ho an'ny fanangonana atiny izay afaka manangona izay zava-mitranga eran'izao tontolo izao. Miorina amin'ny atiny novokarin'ny mpampiasa tsotra, sy ny fifandraisana misy eo amin'ny olona sy ny atiny soatoavina, ny fifandraisana misy eo amin'ny olona, ​​ary ny fifandraisana misy eo amin'ny olona sy ny varotra, izay miteraka lanja ara-barotra ho an'ny mpampiasa.
Fantatrao 15 taona lasa izay, ny fax dia iray amin'ireo fifandraisana lehibe amin'ny orinasa. Saingy androany mbola azonao jerena ao amin'ny biraonao Eny, mety mahita angamba ianao. Saingy mijanona sy matory fotsiny eo. Androany isika dia tena malaza amin'ny WA, Facebook, Youtube, Twitter, Linkdin sns. Midika izany fa niova ny fitaovana enti-miaina ary niova tanteraka koa izao tontolo izao Ka inona no azontsika atao amin'ity toe-javatra ity. Izahay, SUNSOUL dia nanapa-kevitra ny handray ny azo ovaina ary hampifanaraka ny tontolo manodidina. Ka androany isika dia mijoro eto, ankehitriny izaho sy ianao ny elanelana dia ao amin'ny efitrano iray fotsiny. Tena tsy mampino ary mampino. Andao ary hosokafantsika ny varavarana mba hampisehoana aminao ny zavatra ananantsika ary inona no azontsika omena
Tongasoa daholo ny namana manatevin-daharana anay, misaotra betsaka amin'ny fahatongavanareo ！！
Niomana amin'ny fanomezana manokana ho an'ny mpanjifa vaovao an-tserasera koa izahay. Ka raha mahaliana anao izany, pls jereo ny fandefasana mivantana amin'ny ora ara-potoana, dia hanome anao fahagagana izahay!
Previous: Fikojakojana tsara, ho velona lava ny fiara
Next: Fa maninona no lafo be ny vidin'ny fikolokoloana fiara?